Terrarium Kpoo Akwa China Manufacturers & Suppliers & Factory
Terrarium Kpoo Akwa - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Terrarium Kpoo Akwa)
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe mgbochi kpo oku na-ekpo ọkụ na-emekarị nke PTC dị ka ihe ọkụkụ kpo oku. PTC kpo oku film bụ a smart kpo oku film na akara ahụ ike oriri na-akpaghị aka site ịchịkwa ndị na-eguzogide maka onwe ya na-enweghị thermostat .A inogide ihe onwunwe, mmiri na-eguzogide, a nti-ata na-eji na anụmanụ kpo oku...
USB na-akwado aka ọkụ
Ọ bụ ụlọ ọrụ gị mgbe niile na-edezi ihe? Ndi aka gi na-amalite n'igwu elu mgbe i na-abanye n'ime ulo oyi? Mgbe ahụ, nke a mara mma (ma ọ bụrụ na ọ bụ obere nzuzu) bụ ihe ị chọrọ. USB na-akwado ha, ha kwesiri ekwesịrị ma ọ bụ aka kachasị ukwuu. Ọ bụrụ na ị bụ otu nnukwu Japanese omenala [naanịi], ha ga-ekpo ọkụ...
Kpoo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ na batrị a na-agbanye ike
Kpoo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ na batrị a na-agbanye ike Atụmatụ: Ihe mgbochi akpụkpọ ụkwụ na-arụ ọrụ nke ime ka ọbara microcirculation, mgbochi-inflammatory na analgesia. Ndị mmadụ nile, karịsịa ụmụ akwụkwọ, ndị na-acha ọcha, ndị okenye, ndị na-elekọta ndị uwe ojii na ndị uweojii na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè, ndị...
Swee mmiri na-akwa mmiri na-akwa nchara
Ejiri ejiji na-acha mmiri mmiri nke nwere ike ịmepụta ihe na-achagharị agba agba maka ịmegharị ụgbọ elu na mmanụ ọkụ. Nkọwapụta Ngwaahịa: akpụkpọ ụkwụ aka + azụ nke plam Ọkwa atọ na-achịkwa okpomọkụ Ihe: ihe na-eme ka ihe ọkụkụ, EVA Oge na-arụ ọrụ: oke okpomọkụ 3 awa, ọkara okpomọkụ 5 awa, obere okpomọkụ 8 awa Na-arụ...
Terrarium Kpoo Akwa Terrarium kpoo akwa 8W Terrarium Chaating Pad Kpoo akwa akwa N'okpuru Fish Terrarium Heat Mat Thermo Pet Mat N'okpuru Tank Terrarium Heater heating pad